လုပ်ကွက်အတွင်းမှ တန်ဘိုးမြင့် ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကို ရေမဆေးသမားများ ရရှိ – Yaw Myanmar
လုပ်ကွက်အတွင်းမှ တန်ဘိုးမြင့် ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကို ရေမဆေးသမားများ ရရှိ ….
“ ကျောက်ကို လုပ်ကွက် လုံခြုံရေး ရဲတွေကို ငါးတစ်ပေးမယ် ( အဆိုပါကျောက်စိမ်းတုံးရောင်းချရလျှင် ရောင်းရငွေရဲ့ ငါးပုံ တပုံ ပေးရ) ဆိုပြီး ညှိသယ်ခဲ့ရတာ ။ ကျောက်အပြင်ရောက်တော့ ရဲတွေရဲ့ ငါးတစ်စုကို သိန်း ၇၀၀ ဈေးဖြတ်ပေးနေပြီ ။
ရဲတွေက သူတို့အစု သိန်း ၇၀၀ အစု ကို အကုန်လုံး မယူပဲ သိန်း သုံးရာ့ငါးဆယ်ပဲ ယူပြီး ကျန်တဝက်ကို အစုဆက်လိုက်လာတာ ။ အခုအဲဒီကျန်တဲ့ သိန်းရာ့ငါးဆယ်စုကို သိန်း ၇၀၀၀ တောင်ပေးနေပြီ ” လို့ ၎င်းက ဆက်ပြောပါတယ် ။
အဆိုပါကျောက်စိမ်းတုံးကြီးမှာ လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတည်ပြုချက် ရယူနိုင်ရန် လုပ်ကွက်လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ ဗျူးဟာမှူးကို အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ ဆက်သွယ်မရခဲ့ပါဘူး ။
ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်းဒေသမှာ ရေမဆေးကျောက်ရှာဖွေသူများနဲ့ လုပ်ကွက်လုံခြုံရေး ယူထားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့ ပတ်သက်မှုတွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို တွေ့မြင်ကြားသိနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
Credit : ဇော်မိုးထက်(ဖားကန့်)
လုပျကှကျအတှငျးမှ တနျဘိုးမွငျ့ ကြောကျစိမျးတုံးကွီးကို ရမေဆေးသမားမြား ရရှိ ….
“ ကြောကျကို လုပျကှကျ လုံခွုံရေး ရဲတှကေို ငါးတဈပေးမယျ ( အဆိုပါကြောကျစိမျးတုံးရောငျးခရြလြှငျ ရောငျးရငှရေဲ့ ငါးပုံ တပုံ ပေးရ) ဆိုပွီး ညှိသယျခဲ့ရတာ ။ ကြောကျအပွငျရောကျတော့ ရဲတှရေဲ့ ငါးတဈစုကို သိနျး ၇၀၀ ဈေးဖွတျပေးနပွေီ ။
ရဲတှကေ သူတို့အစု သိနျး ၇၀၀ အစု ကို အကုနျလုံး မယူပဲ သိနျး သုံးရာ့ငါးဆယျပဲ ယူပွီး ကနျြတဝကျကို အစုဆကျလိုကျလာတာ ။ အခုအဲဒီကနျြတဲ့ သိနျးရာ့ငါးဆယျစုကို သိနျး ၇၀၀၀ တောငျပေးနပွေီ ” လို့ ၎င်းငျးက ဆကျပွောပါတယျ ။
အဆိုပါကြောကျစိမျးတုံးကွီးမှာ လုံခွုံရေး ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှရေဲ့ ပါဝငျပတျသကျမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး အတညျပွုခကျြ ရယူနိုငျရနျ လုပျကှကျလုံခွုံရေး ရဲတပျဖှဲ့ ဗြူးဟာမှူးကို အကွိမျကွိမျ ဆကျသှယျခဲ့ပမေဲ့ ဆကျသှယျမရခဲ့ပါဘူး ။
ဖားကနျ့ကြောကျစိမျးတှငျးဒသေမှာ ရမေဆေးကြောကျရှာဖှသေူမြားနဲ့ လုပျကှကျလုံခွုံရေး ယူထားတဲ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားရဲ့ ပတျသကျမှုတှဟော မကွာခဏဆိုသလို တှမွေ့ငျကွားသိနရေတာလညျး ဖွဈပါတယျ ။
Credit : ဇျောမိုးထကျ(ဖားကနျ့)